Bosphorus Tube Crossing နှင့် Gebze မီးရထား Halkalı ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများအကြောင်း RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Bosphorus Tube Crossing နှင့် Gebze မီးရထား Halkalı Suburban Lines အကြောင်း
11 / 11 / 2019 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Maps, မြို့ပြရထားစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
ရထားလမ်းရေလက်ကြားပြွန်ကိုဖြတ်ကူးနှင့် gebze လက်စွပ်ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများတိုးတက်မှု
Bosphorus Tube Crossing နှင့် Gebze မီးရထား Halkalı ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများတိုးတက်လာခြင်း၊ ဥရောပခြမ်းတွင်တည်ရှိသည် Halkalı အာရှဘက်မှဂက်ဘ်ခရိုင်များကိုမပြတ်မတောက်၊ ခေတ်မီ။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောဆင်ခြေဖုံးရထားလမ်းစနစ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်၊ Istanbul ရှိဆင်ခြေဖုံးရထားလမ်းစနစ်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့် Bosphorus Tube Crossing ကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ ၎င်းတွင်အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်။
1. Bosphorus အောက်ရှိချဉ်းကပ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ မြေအောက်သုံးခုနှင့် 1387 မီတာနှစ်မြှုပ်ထားသောဥမင်များရှိမြေအောက်ဘူတာနှစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း။
2. ရရှိနိုင် Gebze-Halkalı လုံးဝလျှပ်စစ်သံလိုက်စနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ခြင်းအားဖြင့် 63 ကီလိုမီတာဆင်ခြေဖုံးမီးရထားလမ်းကိုအဆင့်သုံးလိုင်းများအကြား။
19,2 ကီလိုမီတာသည်ဥရောပတွင်တည်ရှိပြီး 43,8 km သည်အာရှတွင်တည်ရှိသည်။
3. မီးရထားယာဉ်ထုတ်လုပ်မှု 440 ။
●●အာရှ - ဥရောပတိုက်ကြီးများနှင့်ပင်လယ်ရေအောက်ရထားလမ်းစနစ်များအကြားချိတ်ဆက်မှု၊
●●စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာများကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာအလျင်မြန်ဆုံး ၀ င်ရောက်နိုင်မှုသည်မြို့၏မတူညီသောအချက်များကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပိုမိုနီးကပ်စေပြီးမြို့၏စီးပွားရေးဘဝကိုပိုမိုအားကောင်းစေမည်။
●●လက်ရှိ Bosphorus တံတားများပေါ်အသွားအလာဝန်ကိုလျှော့ချ,
Marmaray စီမံကိန်း၊ ၎င်းသည်အာရှဘက်မှAyrılıkçeşmeနှင့်ဥရောပဘက်မှKazlıçeşmeအကြားရှိ 13,6 ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ Bosphorus ၏အခြေစိုက်စခန်းတွင်အာရှနှင့်ဥရောပဘက်များရှိဆင်ခြေဖုံးရထားလမ်းစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ပေကျင်းမှလန်ဒန်သို့ရထားလမ်းများကိုမရပ်မနားသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ (ODA) တွင်ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA) နှင့်အတူတူရကီ၏ Marmaray စီမံကိန်းသမ္မတနိုင်ငံကသဘောတူလုပ်ချေးငွေ၏မူဘောင်အတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ချေးငွေအတိုင်းအတာအတွင်းငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Marmaray သည် 13,6 ကီလိုမီတာအရှည်ရှိပြီးဥရောပနှင့်အာရှနှစ်ဖက်လုံးရှိမြို့၏အောက်တွင်တူးဖော်ခြင်းဥမင်များရှိသည်။ (နှစ်ခုလိုင်းများ 12,2km) အရှည်ချဉ်းကပ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့်အတူလည်ချောင်းအောက်မှာ 19,2m ။ အရှည်အများဆုံးရေမျက်နှာပြင်ကနေအများဆုံး 1.387m ။ က de-rin, 60m ။ အမြင့်နှင့် 8,6m ။ 15,3 1 ပုံစံ၊ 1 ယူနစ်များကို2ယူနစ်အဖြစ်တည်ဆောက်သည်။
Gebze-Halkalı ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများတိုးတက်ခြင်း - ဆောက်လုပ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုစနစ်များ
စီမံကိန်း၏ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်သော 63 ကီလိုမီတာရှည်သောမြို့ဆင်ခြေဖုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဥရောပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် (EIB) နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောဥရောပကောင်စီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် (AKKB) မှငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။
ဒီစီမံကိန်း အခြေခံအဆောက်အအုံများအပါအ ၀ င်လိုင်းလုပ်ငန်း၊ အချက်ပြစနစ်၊ မြေပြင်ဘူတာများ၊ လည်ပတ်မှု၊
●●လက်ရှိ (နှစ်လမ်းသွား) ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများ3မှလိုင်းများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်, အပေါ်ယံမြေအောက်ရထားလမ်းလိုင်းများတိုးတက်နှင့်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
●●လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိစုစုပေါင်း 36 ဘူတာအသစ်များကိုခေတ်မီဘူတာများအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး2ဘူတာအသစ်များတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
●● 3.hat မြို့တွင်းကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်ရထားအသုံးပြုလိမ့်မည်။
●●Kazlıçeşme-Söğütlüçeşmeနှင့်ဆင်ခြေဖုံးစစ်ဆင်ရေး, Gebze အကြား 18 မိနစ် Halkalı 105 မိနစ်အကြား။
●● T20 မြို့တွင်းရထားလိုင်း၊ Gebze နှင့် Pendik, Gebze နှင့် Pendik အကြားရထားဘူတာများအကြား3ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်းတွင်3လိုင်းအဖြစ်ဆောက်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်လိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Ankara-Istanbul YHT Project နှင့်အတူ 25 ဇူလိုင် 2014 တွင်စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ။ ဤဒေသရှိအခြားလိုင်းနှစ်ခုနှင့်အတူ, 10 အသွားအပြန်ဘူတာပြီးစီးခဲ့သည်။
440 အပိုင်းပိုင်း (34 အပိုင်းအစ 10 ယာဉ်ရထားစီးရီးနှင့် 20)
5 ယာဉ်ရထားစီးရီးအရေအတွက်) မီးရထားယာဉ်၊
●●အသုံးပြုသောပစ္စည်းများ, အဆောက်အ ဦး များနှင့်အလုပ်သမားစာချုပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းသက်သေပြရန်လိုအပ်သည့်စမ်းသပ်မှုအားလုံး,
●●5သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလုပ်အားလုံးကိုထိန်းသိမ်းသည်။
Marmaray စီမံကိန်းလမ်းကြောင်းတွင်အသုံးပြုမည့် 34 × 10 နှင့် 20 ×5ယာဉ်များပြီးစီးခဲ့သည်။ ဤအယာဉ်များ၏ယူနစ်၏ installation တူရကီအတွက် 440 EUROTEM Adapazari စက်ရုံထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်များကို Edirne နှင့် Sirkeci ယာယီ Gare နေရာများတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးကာကွယ်ထားသည်။ TCDD Taşımacılık A.Ş. သို့ပို့ဆောင်သော 195ယာဉ်စီးရီး၏အချက်ပြနှင့်ရေဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းသည်ပြီးစီးခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင် Marmaray လုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုနေသည်။
Gebze Halkalı Marmaray Metro မြေပုံ
Gebze-Haydarpaşaနှင့် Sirkeci- Halkalı ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများ ...
Gebze Halkalı Suburban Line Infrastructure 2018 …
အဆိုပါ 80 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီး Halkalıဆင်ခြေဖုံးလိုင်းရှိဂက်ဇ်
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် GebzeHalkalı ယာဉ်မတော်တဆမှုဆင်ခြေဖုံးဒုတိယ Hatter!
Gebze- Halkalı ခရီးသည်လိုင်း 2018 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်
ဝန်ကြီး Arslan: GebzeHalkalı 2018 X မှာအသွားအပြန်လိုင်း
Gebze Halkalı xnumx ရဲ့ OK ကိုခရီးသွားလက်မှတ်လိုင်း၏ရာခိုင်နှုန်း
Gebze Halkalı ခရီးသွားလက်မှတ်ရထားဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါ?
ဝန်ကြီး Arslan, GebzeHalkalı သူခရီးသွားလက်မှတ်လိုင်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါသည်
မီးရထား Bosphorus Tube Crossing
Sirkeci ယာယီ Gare က်ဘ်ဆိုက်များ